Voankazo hohanina hiadiana amin'ny tsy fahampian-dra | Nutri Diet
Voankazo hohanina hiadiana amin'ny tsy fahampian-dra
Fausto Ramirez | | sakafo, Resipeo mahasalama
ny voankazo Izy ireo dia fanampin-tsakafo ilaina izay mampihena sy manasitrana anemia. Ny natiora dia manome antsika singa ilaina izay ahafahantsika mahazo ny otrikaina rehetra amin'ny vatantsika. Amin'izany fomba izany, ny voankazo dia tsy manome vy fotsiny, fa koa vitaminina izany dia manampy amin'ny fametahana ny tahan'ny vy ao amin'ny vatana, ary hanonerana ny tsy fahampiana.
1 Voasary sy voasarimakirana
3 Paoma sy paoma malama
Voasary sy voasarimakirana
Manankarena ny voankazo voasary vitaminina C. Araka ny efa nolazainay, izy ireo dia mihetsika ho toy ny famenon-danja ilaina amin'ny fitondrana. Isaky ny sakafo maraina dia tokony misotro ranom-boasary ianao ary manomana lovia oatmeal iray lovia, miaraka amina frezy, kennel, amandy, sns. Aorian'izay dia afaka manampy kely ny ranom-boasarimakirana. Ireo fihetsika rehetra ireo dia ahafahana mitsabo anemia.
ny plum izy ireo dia iray amin'ireo voankazo fanafody tsara indrindra. Ny plum dia mampiroborobo ny fandevonan-kanina, manamaivana ny fitohanana sy ny fivontosana, manome hery antsika ary manome fatra vy tsara ho antsika. Raha atao teny iray dia tsara izy ireo. Azo hanina manta na maina koa izy ireo. Amin'ity tranga ity dia nantsoina izy ireo plum voaloboka. Izy ireo dia mety amin'ny sakafo maraina na amin'ny sakafo maraina antoandro mba hahatsapanao ho feno tanjaka. Aorian'ny voankazo voasary makirana, ny plum no voankazo mahomby indrindra hiadiana amin'ny tsy fahampian-dra.
Paoma sy paoma malama
ny paoma salama, matsiro, maro zavatra ary mahasitrana izy ireo. Raha ny paiso dia azontsika lazaina izany. Noho izany dia manana hevitra kely momba ny tombontsoa azo avy aminy ianao smoothie paoma sy poara. Mety ho an'ny sakafo maraina izy io. Paiso paoma sy poara fotsiny, apetraho ao anaty blender ary ampio rano iray vera. Matsiro ity malama ity ary mamela hampiakatra ny tahan'ny hemôglôbininy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » sakafo » Resipeo mahasalama » Voankazo hohanina hiadiana amin'ny tsy fahampian-dra
Torohevitra hampihenana ny lanja voajanahary